Telestream သည် PRISM Media Processing Platform အတွက် 25GE ကွန်ရက်အထောက်အပံ့ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Telestream PRISM မီဒီယာထုတ်ယူခြင်းပလက်ဖောင်းများအတွက် 25GE ကွန်ယက်ပံ့ပိုးမှုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
နီဗားဒါးစီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယား, သြဂုတ်လ 22 - IBC 2019 မှာ, Telestream (Booth 7.C16 & 7.C14), ဖိုင်-based မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာ orchestration, မီဒီယာ streaming များနှင့်ပေးပို့နည်းပညာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်၎င်း၏အဓိကအသစ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြပါလိမ့်မယ် PRISM မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ပလက်ဖောင်း။ Telestream PRISM မကြာသေးမီကဝယ်ယူသည့်အခါ Tektronix ၏ဗီဒီယိုစမ်းသပ်မှု, စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစျေးကွက်သို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်များအတွက် Telestream.
PRISM ရိုးရာ SDI နှင့် IP မီဒီယာကွန်ရက်များအကြားကွာဟချက်ကိုတံတားနှင့်ယခု 25GE ကွန်ရက်ထောက်ခံမှုဖွအသစ်တစ်ခုရောထွေးမီဒီယာကဒ်နှင့်အတူကြွလာသောစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးဟိုက်ဘရစ်အိုင်ပီ / SDI မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကရောထွေးမီဒီယာကဒ်နှင့်အတူသစ်ကိုယူနစ်တစ်ခုသာဆော့ဖ်ဝဲကို update ကိုလိုအပ်နေချိန်မှာလက်ရှိထည့်သွင်းယူနစ်ကိုအလွယ်တကူ, ဟာ့ဒ်ဝဲတပ်ဆင်ရန်ရိုးရှင်းသောနှင့်အတူလယ်ပြင်၌အဆင့်မြှင့်တင်ခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအဆင့်မြှင့်လမ်းကြောင်းတူညီတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာရရှိနိုင်ပါသည်။
စူပါ high-resolution ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်အချက်ပြမှုများ၏မျိုးဆက်သစ်များ၏ကူးစက်ခြင်းအားဖွင့် - PRISM အတွင်း 25GE interface ကို၏ထို့အပြင် SD ကမှမီဒီယာကွန်ရက်များအမျိုးမျိုးတို့အတွက်ထောက်ခံမှု 4K HDR နှင့် WCG ဖို့အားလုံးကိုလမ်းပေးပါသည်။
"PRISM IP ကိုအကူးအပြောင်းဖို့ SDI မှတဆင့်လမ်းကိုဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ PRISM ၏အသစ် 25GE စွမ်းရည်အသုံးပြုသူများကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြု, နှင့်ကြည့်ရှု, compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K အချက်ပြမှုများကို IP ကွန်ရက်များပေါ်တွင်သယ်ဆောင်ခံရ, "Tsuyoshi Kitagawa မှာကုန်ပစ္စည်း Manager ကို commented Telestream။ "အသုံးပြုသူများကနဦးဝယ်ယူဆုံးဖြတ်ချက်များက de-အန္တရာယ်များနှင့်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်ရသောမည်သည့်အချိန်တွင်မဒီ 25GE စွမ်းရည်မှပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ "
PRISM တစ်ခုတည်း platform ပေါ်တွင်အင်ဂျင်နီယာ, စစ်ဆင်ရေးနဲ့ content ဖန်တီးသူ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ software ကိုရွေးချယ်စရာတစ်ဦးကရှေးခယျြမှုဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်အနာဂတ်အဆင့်မြှင့်၏လွယ်ကူခြင်းအပေါ် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ PRISM မသက်ဆိုင်ကြောင့် SDI သို့မဟုတ် IP ပေါ်တွင်သယ်ဆောင်ခံရ 4K မှ SD ကနေတစ်ခုတည်း box ကိုဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ platform ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မြေတပြင်လုံးအသင်းကိုဖြတ်ပြီး UI ကိုများနှင့်တိုင်းတာ resolution ကိုမှပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပိုမြန်ကြိမ်ကို enable ။ Telestream အဆိုပါ 25RU3"အပြည့်အဝ touchscreen က, MPI9-2 အဖြစ် 25RU rasterizer, MPX1-2 - နှစ်ဦးစလုံး PRISM ပုံစံအချက်များအတွက် 25GE option ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးမော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်အဆိုပါသက်သေပြ PRISM IP ကိုတိုင်းတာ။ အားလုံးထိုကဲ့သို့သော STOP waveform အဖြစ် HDR / WCG features တွေ, CIE ဇယားများနှင့်အယူမှားအရောင် display တွေအမျိုးမျိုး 4GE မှတဆင့်သယ်ဆောင်သော 25K အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017 စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-22
ယခင်: အယ်ဒီတာ + Colorist
နောက်တစ်ခု: Vela 6.0-ဗားရှင်းစမတ်-logger IBC-2019 မှာသရုပ်ပြ